Muxuu ka yiri Jordi Alba guuldarada Real Madrid kasoo gaartay kooxda Eibar? – Gool FM
Muxuu ka yiri Jordi Alba guuldarada Real Madrid kasoo gaartay kooxda Eibar?
Dajiye November 25, 2018
(La Liga) 25 Nof 2018. Difaaca garabka bidix ee kooxda Barcelona ee Jordi Alba ayaa sheegay inaysan layaab ku noqonin guuldarada 3-0 ahayd ee kooxda Real Madrid kasoo gaartay dhigeeda Eibar kulankii shalay ee horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Real Madrid ayaa kala kulantay guuldaro xanuun badan Eibar kulnkii ka tirsanaa kulamada 13-aad ee horyaalka La Liga ee xili ciyaareedkan 2018/2019.
Kadib guuldaro kale ay la kulantay kooxda Real Madrid xili ciyaareedkan ayaa waxay ka dhigtay inay fadhido booska 6-aad ee dhanka kala sareynta horyaalka La Liga, waxayna 5 dhibcood u jiraan hogaamiyaasha Barcelona.
Jordi Alba ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu kaga hadlay guuldarada ay la kulantay kooxda Real Madrid.
“Layaab iguma noqoneyso guuldarada soo gaartay kooxda Real Madrid, kooxaha dhex dhexaadka ah ee horyaalka La Liga ayaa sameenaya hormar, sida aan horey u soo aragnay, waxaana sii wadi doonaa hormarka”.
“Waxaa suuragal ah in ay guuldaro la kulmaan dhamaan kooxaha waaweyn, sidaas darteed layaab iguma noqoneyso guuldarada soo gaartay Real Madrid”.
“Kadib bixitaanka Cristiano Ronaldo kuma guuleysaneyso koobab iyo sidoo kale kulamo, sababa la xiriira hal ciyaaryahan, waa hubaal in Ronaldo uu muhiim u ahaa Real Madrid”.
“Laakiin kooxda Real Madrid waxay heysataa ciyaartoy kale ee cajiib ah, Real Madrid waa Real Madrid, mana jirto wax marmarsiyo ah”.
"Ousmane Dembele Wuxuu heystaa waxyaabo aysan heysan Ciyaartoyda kale.".
"Ma garan waxa ay iga damacsan tahay Barcelona.". Jordi Alba oo Afka furtay